कसरी फकाउने रिसाएकी श्रीमतीलाई ? « Himal Post | Online News Revolution
कसरी फकाउने रिसाएकी श्रीमतीलाई ?
प्रकाशित मिति : २०७६, २४ जेष्ठ २१:५९
भनाइ नै छ बिनाश काले विपरित बुद्धि…रिसाएको बेलामा केही यस्तै अवस्था हुन्छ । मानिस रिसाएको बेला के सही के गलत सोच्दैन । उ खाली आफ्नो रिस देखाउनमात्र तत्पर रहन्छ । यस अवस्थामा भएका घटनाले पछिसम्म नराम्रो परिणाम दिने गर्छ । अझ यसको असर वैवाहिक जीवनमा धेरै नै हुन्छ ।
श्रीमान र श्रीमतीबीच वैचारिक मतभेद हुनु सामान्य कुरा हो । केही कुरामा मतभेदका कारण झगडा हुनु पनि सामान्य नै मानिन्छ । तर, उक्त रिसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ठुलो दुर्घटना समेत निम्तिने गर्छ ।